Shiinaha 3003 5052 Aluminium Dheemanka Albaabka Tread -saaraha iyo Bixiyaha | Ruiyi
Saxanka dheemanka aluminium dheemanka ama saxanka dabaqa ayaa si weyn loogu isticmaalaa codsiyada qaab -dhismeedyada kala duwan, qaab -dhismeedka iyo qurxinta. Waxaa la sameeyay hab lagu duubo taargooyinka birta oo leh qaab "lug" ah oo kor loo qaaday, oo la siinayo macaamilka doorashooyin dhowr ah oo sida ugu fiican u dabooli kara baahida mashruuca, oo leh sifooyin gaar ah oo nadiif ah, iska caabbinta saamaynta, xoogga taageerada, iyo iska caabinta daxalka
3003 H22 Plate Tread Diamond - Kani wuxuu leeyahay sifooyin la mid ah midka caadiga ah ee 3003 aluminium oo leh hannaanka tuman ee kor loo qaaday si loo hagaajiyo jahawareerka. Tan waxaa inta badan loo adeegsadaa sanduuqyada aaladda, darbiyada derbiga, sagxadda dhulka, sariirta gawaarida xamuulka ah iyo jarista, garaashka iyo qalabaynta aqoon -isweydaarsiga, taarikada tallaabada iyo codsi kasta oo kale oo u baahan culeyska khafiifka ah iyo xoogga 3003 aluminium oo leh kororka hannaanka tuman ee kor loo qaaday.
Aluminium jaranjarada jaranjarada, Aluminium tuman saxan Brite, Soosaarayaasha saxanka hubiyaha Aluminium, shiinaha aluminium daloollan, soosaarayaasha xaashida dheemanka, soosaarayaasha saxanka tuman ee aluminium
3000 aluminium oo taxane ah waa aluminium aluminium manganese ah, oo ka kooban manganese-ku waa qiyaastii 1.0-1.5%. Aluminium 3000 taxane wuxuu leeyahay shaqada ka-hortagga miridhku ugu fiican. Markaa, noocyadan aluminiumka ah ee caaga ah ayaa si caadi ah loogu adeegsadaa qaboojiyaha, qaboojiyaha, hoosta baabuurka iyo jawi kale oo qoyan. Qiimaheedu wuxuu ka sareeyaa 1000 aluminium oo taxane ah. Intaa waxaa dheer, 3000 aluminium oo taxane ah looma daaweyn karo oo la xoojin karo, laakiin waxaa lagu xoojin karaa geedi socodka dhagax-dhigista qabow.
Badeecadaha wakiilka ah ee aluminiumkan aluminiumka caadiga ah waa 3003, 3A21, 3004, 3015 iyo wixii la mid ah. Daawaha Aluminium 3003 wuxuu leeyahay baaxad sare iyo alxanka aad u fiican. 3003 aluminium ayaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo dareerayaal kala duwan ama weelasha gaaska, sida haamaha saliidda, baatroolka ama dhuumaha saliidda saliidda iyo wixii la mid ah.
Aluminium 3000 waa mid ka mid ah badeecadaha kulul ee lagu iibiyo warshadaha Aluminium RUIYI. Waxaa ka mid ah aluminium badan oo aluminium caadi ah, RUIYI Aluminiumku wuxuu ku siin karaa tayo sare leh iyo noocyo badan oo ah alaabada daaha aluminium 3003, si loo caawiyo ganacsigaaga.
3003 Aluminium Dheemanka Tread Tread
Xanaaq: H16, H18
Midabka: Midabka RAL, Qalin, Dahab, Naxaas, Madow, Pink, Casaan, cagaar, midabka birta aan lahayn
Caddayn: Dhinac labalaab ah ayaa dhammaaday
Badarka dhulka: badarka toosan, badarka Nakanaga, badarka gaagaaban, hadhuudhka hannaanka iskutallaabta ah
Ilaalinta dusha: filim ama maya, sida waafaqsan shuruudahaaga
Faahfaahinta xirxirida: baakad alwaax ah oo xoog leh oo xirxirida badda sida waafaqsan ISPM 15
Faahfaahinta geynta: qiyaastii 15 maalmood ka dib marka la helo deebaajiga
Xusuusnow: nolosha shelf ee filimka Ilaalinta dusha sare waa 6 bilood, deebaaji, shuruudaha kaydka: qalalan iyo hawo, iska ilaali kuleylka iyo qorraxda tooska ah. Haddii heerkulka sare, bay'ada cad-cad ee jawigu, ay noqon doonto hadhaaga ama aan awoodin inay jeexdo marka lagu daro ifafaalaha
1. Daboolka kala duwan iyo marawaxadda gaaska qiiqa
3. Kuleyliye biyo iyo kaloriye
4. Beddel oo demi
5. Qalabka elektarooniga ah
6. Laambado iyo siraaddo
7. Aluminium guddi ka kooban
8. Qalabka guriga iyo qalabka guriga
9. Qolofka taleefanka gacanta
10. jir aluminium
11. Hami wanaagsan
12. Looxa dahaarka leh
13. Saxeex iyo saxan magac
14. Boorsooyin, kiisas iyo shandado
15. Saxanka aan dabka lahayn
16. Guddi kombiyuutar
17. Guddiga qurxinta baabuurta
1. Biraha aadka u xooggan, midabka hodanka ah, moodada iyo korka u sarreeya
2. Wuxuu noqon karaa mid si toos ah u shaabadeeya, iyo qaybaha laabaya oo u adkaysan kara dillaaca
3. cimri dherer dhaqid, xoq u adkaysta
4. Korontada ka hortagga gu'ga, ma laha hami, si sahlan loo nadiifiyo
Hore: 1050 1060 1100 gariiradda Sheet Aluminium
Xiga: 6061-T651 Sheet Aluminium
Diamond Tread Qaab Slip-Adkaysi Aluminum S ...
Resistance fiican miridhku Aluminum Checkered Pl ...